परिणाम जेजस्तो आए पनि स्वीकार गर्न तयार छु « Sahakari Nepal
परिणाम जेजस्तो आए पनि स्वीकार गर्न तयार छु
प्रकाशित मिति : 12 November, 2014 6:02 am
ऋषिराज घिमिरे अध्यक्ष प्रत्यासी
चुनावको तयारी के छ ?
यो सहकारीकर्मीको तीनतीन वर्षमा आउने चाड हो । यो वर्ष निर्वाचन हुने भएकाले चुनावको तयारी शुरु भएको छ । निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक लैजानका लागि हामी प्रयासरत छौं र सञ्चालकको पाँच भूमिकामध्ये निरन्तताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बेच्न मिल्दैन्, यसलाई निरन्तर अघि बढाउनको लागि मौजुदा सञ्चालक समितिले नयाँ सञ्चालक समिति बनाउने गर्छ । यतिबेला बजारमा कोही के, कोही भनेर सुन्नुभएको होला, हामीलाई पक्ष विपक्ष केही कुरा थाहा छैन् । सहकारीको एउटा पक्ष थाहा छ, पार्टीको कुरा जान्दैन् । सहकारी अभियानको होल टिम बनाउने काम भइरहेको छ । ५ विकास क्षेत्रबाट ५ जना प्रतिनिधि हुन्छन्, त्यस्तै एक जना महिला उपाक्ष्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सञ्चालकमा तीन जना, लेखा समितिमा २ जना, उपाक्ष्यक्षमा १ जना गरी ५ जना अनिवार्य महिला राख्ने व्यवस्था छ । २४ वर्षदेखि सहकारीमा लागेको छु । यो अन्तिम पटक हो । म उपाध्यक्षमा अन्तिम पटक भएकाले जाने ठाउँ अध्यक्ष हो । हारे पनि जितेका साथीहरुलाई सघाउने हो ।
तपाइ उपाध्यक्ष भएर गर्न नसकेका काम के छन् ?
सहकारी खोल्दा बचत गर्ने र ऋण दिने मात्र बुझिएको थियो । आज त्यो फड्को मारेर धेरै कुरा भइरहेको छ । अहिलेको मुख्य काम भनेको अनुगमनको कुरा हो । २९ हजार सहकारीमध्ये १४ हजार सहकारी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने मात्र छन् । नेफ्स्कुनमा आवद्व लगभग २ हजार छन् । धेरै ग्याब भएकाले जतिसक्दो धेरै सहकारीलाई नेफ्स्कुनमा आवद्व गर्ने मेरो सोच छ । र सामान्य चलेका, प्रविधि नजानेकालाई प्रविधि सिकाउनुपर्ने काम छ । र अहिले संख्यात्मकरुपमा सहकारी धेरै भएको तर गुणात्मक काम कम भएकाले एकीकरण गर्नुपर्ने चुनौति पनि छ । आफ्ना सदस्यको अनुगमन गर्न टुल्स बनाउन लागेका छौं । टुल्स बनाउन क्यानडाको ठूलो एउटा ठूलो संस्थासँग समन्वय गरेर अघि बढेका छौं । यहाँ पनि छुट्टै अनुगमन शाखा तथा विभाग गठन गरेर विभागको सहकार्यमा अनुगमन गर्ने सोचमा छु । तालिम, शिक्षा अनवरत चल्ने कुरा हो । लेखा, व्यवस्थापन, पल्सको तालिम प्रदान गर्नुका साथै अन्तरलगानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । साकोसहरुको बैंक नेफ्स्कुन हो । तर हामीसँग पूँजि करिब १ अर्ब छ ।
तपाइ अध्यक्षमा निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ । कुन पार्टीबाट टिकट लिएर प्यानल खडा गर्दै हुनुहुन्छ ?
कोही राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्ने भनेर भन्दिन् म । आस्था केवल सहकारीमा मात्र रहेको छ । सहकारीमा को आस्था राख्ने मान्छे पर्छन मलाई थाहा छैन् तर सहकारीमा एउटा यस्तो टिम बन्दै छ । केन्द्रिय संघ चलाउन सक्ने टिम बन्छ मेरो । गरिब निवारणका कुरा, लघु वित्तको कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्दछ लागायतका कुरा गरेर खेमा खडा गर्न म जान्दैन् । खेमा नै नबनाएर हारिन्छ भने मलाई हार्न कुनै समस्या छैन् । म खुसीसाथ घरमा बस्न तयार छु ।
जेजस्तो भएपनि तपाई अध्यक्षमा निर्वाचन लड्नलाई पनि टिम त बनाउनुपर्ला । टिम खडा गरीसक्नुभयो ?
राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह नराखी व्यवसायिक टिम बनाउने सोचमा छौं । नेफ्स्कुनमा यस्तो टिम अवश्य बन्छ । भरसक सबै किसिमको प्रतिनिधित्व होस् । सबैले संस्था चलाएको, संस्था बनाएको हुनुप¥यो । अनिमात्र समावेशी हुन्छ । सहकारी बनाएर दुःख गरेका, मेहनत गरेका व्यक्तिको सहभागिता हुन्छ ।
कहिलेसम्म बन्छ त त्यस्तो टिम ?
यो बडो अफ्ठायरो रहेछ । म नेफ्स्कुनमा महासचिव, उपाध्यक्ष भएर सहकारी क्षेत्रमा २४ वर्ष बिताइसकेको छु । यति विश्वास गर्नुस् कि यहाँ संस्था चलाएका, संस्थालाई राम्रा बनाएका व्यक्ति नै नेफ्स्कुनमा आउने छन् । अध्यक्ष एक्लैले संस्था चल्दैन् । टिमले नै संघसंस्था चल्ने हो । अहिले नै सबै पदमा यो मान्छे भन्दा मार्केटमा तरंग उत्पन्न हुन्छ । त्यसकारण पनि भनिरहन हुदैन् । नाम भन्न नसक्नु नै पोलिटिकल बिजनेस हो, त्यो छोटो हुन्छ । हाम्रो मुख्य काम बिजनेस नै हो ।
प्रत्याशीसँग समन्वय गरेर अघि जाने तयारीमा हुनुहुन्छ कि चुनाव लड्ने नै ?
हामी वार्ता गरेर मिलाउन सक्छौं । राजनीतिमा सहमतिका आधारमा काम हुन्छ भने सहकारीमा नहुने केही पनि छैन् । मैले फेरी पनि भनेको छु । सहकारी बनाएकै व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने हो । मञ्चमा भाषण गर्दा पनि मैले बचत तथा ऋण, सहकारी भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्दछ । जोखिम, जखेडाकोष, उत्पादनका विविधिकारणका कुरा जान्नुपर्दछ । यसो नजानेमा मान्छे आउँदा उहाँहरुलाई सिक्नमै समय लाग्छ र कुनै काम हुन सक्दैन् । मेरो दुवै हातमा लड्छु छ । म जितेपछि सारा १५ लाख सहकारीकर्मीको भावना समेट्नुपर्दछ । जितिएन आफ्नै बिजनेस गर्न पाइयो, घरबार हेर्न पाइयो, परिणाम जस्तो आएपनि म खुसी छु । तलब भत्ता पाउने भए मारमार गर्न हुन्थ्यो, किन उठिस् त त्यसो भए भन्नुहोला । मलाई अन्त जान ठाउँ छैन् । हामीले दुईकार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा बस्न नपाइने नियम बनाएका छौं । त्यसकारण म अध्यक्षमा उठेको हो ।
तपाइ अध्यक्षमा जितेपछि सिंगो सहकारीलाई के फाइदा पुग्छ, छोटोमा बताइदिनुहोस् न ?
म अध्यक्ष बनेपछि सहकारीमा सुशासन ल्याउन र अनुगमन गर्न प्रयत्न रहने छ । अनुगमन गर्न सबै केन्द्रिय संघले आफ्ना सदस्यहरुलाई अनुगमन गर्नेछन् । पहिले नेफ्स्कुनले आफ्ना सदस्यलाई अनुगमन शुरु गर्नेछ ।